Mayelana NATHI - uShijiazhuang Tefeng Trading Co, Ltd.
Umshini Wokuhlunga Imbewu
Umshini Welding Wire Wire
IShijiazhuang Tefeng Trading Co, Ltd.
IShijiazhuang Tefeng Trading Co, Ltd Sinamathela kunqubomgomo yebhizinisi "yamazwana ayathandekayo avela kumkhiqizo wekhwalithi ephezulu kanye nensizakalo", futhi ngaleyo ndlela sinikezela ngenkonzo yenqubo yonke kusuka ekwakhiweni komkhiqizo, ukuthuthukisa, ukukhiqiza, ukufaka kanye nensiza yokuthengisa ngemuva abathengi abanamasu okuqala ebangeni lokuqala imikhiqizo ephezulu. Inkampani yethu inikezwe isihloko esithi "Umkhiqizo Othembekile Nokuthembekile Nomhlinzeki Wezinsiza" ngabasebenzisi abaningi. Futhi siqhubeka nokuthuthuka ngesisekelo se-superexcellent level level kanye nokuthuthuka kwengqondo okuthuthukile ukuze silethe imishini yethu ezimakethe zombili zasekhaya nezaphesheya. Silangazelela ukubambisana kwakho ngokuzayo futhi semukele ngemfudumalo ukufika kwakho ukuzokwakha ikusasa lethu elijwayelekile elihle.
Njengamanje, inkampani inemikhiqizo emibili yebhizinisi:
Okokuqala, umshini wokuhlunga imbewu.
Kubandakanya ikakhulukazi: isicoci se-air cleaner, isicoci sokuhlanza esithile, ukushaya uhlobo lwe-specifi cgravity itshe remover, umshini wokugaya, umshini wokuhlukanisa, isethi yokuhlukanisa imbewu kanye nemishini yokufaka eproducts yezolimo isivivinyiwe ngemishini yokuhlola esezingeni eliphezulu yamazwe omhlaba. Banekhwalithi ezinzile, enza kahle kakhulu nobuchwepheshe obuphambili.
Owesibili, umshini wokuxhuma we-wire mesh.
Abakhethekile banomugqa wokukhiqizwa kwephaneli ye-3D, umshini wokuqinisa we-mesh welding, i-EPS yokukhiqizwa kwephaneli yomshini, umshini we-welding we-3D (umshini wokufaka i-bevel ufaka inhlanganisela yomshini wokuhlanganisa), imishini yokufaka insimbi yomshini wokugaya imayini, umshini wokufudumeza we-mesh wensimbi, igridi yensimbi imishini yokufudumeza, umshini we-hexagonal mesh wewing, umshini wensimbi owandisiwe, umshini we-razor wire, umshini we-Diamond mesh, umshini wokuphehla we-pneumatic spot kanye nomshini wokuqondisa nokusika.
Sikholelwa ukuthi insizakalo enhle nekhwalithi enhle kakhulu yimpilo yethu. Semukela ngobuqotho bonke abangane ukuxhumana nathi! Ikusasa elihle likhona. Masikwenze ndawonye!